सिंहदरवारमै मन्त्रीलाई दिईयो दुई बोतल रक्सी उपहार ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
सिंहदरवारमै मन्त्रीलाई दिईयो दुई बोतल रक्सी उपहार !
प्रकाशित मिति : शनिबार, अशोज २७, २०७५
‘पावर ब्रोकर’ देखि कुटनीतिक नियोगसम्मले दशैंमा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिलाई उपहार टक्र्याउँछन् । तर, उपहार के हुन्छ र कहाँ दिइन्छ भन्ने प्रायः गोप्य नै हुन्छ । तर, यसपटक अनौठो भएको छ ।
चिनियाँ दुतावासबाट मन्त्रीलाई दिएको ‘ग्रिन लेबल’ एक लिटरवाला बोतल रक्सीको मुल्य आठ हजार छ । त्यसै गरी भारतीय दुतावासले दिएको ‘‘चिवास टुवेल इयर्स’ रक्सीको एक बोतलको मूल्य पनि झन्डै उस्तै पर्न आउँछ । ratopati बाट